के ‘लिं’,गको आकारले महिलाको ‘याै’, न स’न्तुष्टिमा फरक पार्छ ? – Sanjal Nepal
Homeरोचकके ‘लिं’,गको आकारले महिलाको ‘याै’, न स’न्तुष्टिमा फरक पार्छ ?
January 22, 2021 admin रोचक 7132
लिं७ ग जत्रो भए पनि यो७ नी को क्लिटोरिसमा घर्षण हुँदा महिलाले यौ७ न आन’ न्द पाउँछन्।
अझ अश्व७ लिल फिल्ममा जस्तै पुरुषको लिं७ ग मो’ टो र ला’ मो हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनाउँछन् उनीहरू। अमेरिकाको गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार पुरुषको उ७’त्तेजित नभएको लिं७ को लम्बाइ ३.४ देखि ३.७ इन्च र उत्ते७ जित लिं७गको लम्बाइ ५.१ देखि ५.७ इन्च हुन सक्ने जनाएको छ।
लिं७ गको ल’ म्बाइ र मोटाइ भनेको शा रीरिक कुरामात्र हो तर यौ७ न स’ न्तुष्टि भनेको मान’ सिक र भाव’ नात्मक कुरा हो।
यौ७ न स’ न्तुष्टि लिं७ गको आका’ रभन्दा पुरुष महिलाबीचको प्रेममय क्रि७ डामा भर पर्छ। बजारमा लिं७ ग बढाउने नाममा धेरै किसिमका साधन पाइन्छन्। तीमध्ये पम्पहरू बढी प्रचलित छन्। तर, पम्प प्रयोग गर्दा सा’वधानी अपनाउनुपर्छ। नत्र यसले लिं७ गलाई चो’ट पुर्‍याउनसक्छ।
लिं७ गको आ ’कार ठूलो हुँदा महिलालाई स’मस्या हुन सक्छ। ठूलो लिं७ ग यो७ नीभित्र ब’ लपूर्वक छि ’राउँदा यो७ नीमा चो’ट पनि पुग्न सक्छ। ला’मो लिं७ ग महिलाको यो७ नीको भित्रसम्म पुग्ने र अझ ब’लपूर्वक स७ म्भोग गर्दा महिलालाई पी७ डा हुनुका साथै र’ क्तस्राव पनि हुन सक्छ। त्यसैले ठू’ लो र मो’ टो लिं७ गले महिलालाई च’ रम यौ७ न आनन्द दिन्छ भन्नु ग’ लत हो। लिं७ ’गको लम्बाइ र मोटाइ भनेको शारीरिक कुरामात्र हो तर यौ७ न स’ न्तुष्टि भनेको मान ’सिक र भाव’नात्मक कुरा हो।
न्युओर्क राज्य विश्वविद्यालयले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानमा वी७ र्यमा महिलाको शा रीरिक र मान’ सिक मनोभावमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिने गुण भएको उल्लेख छ । रिपोर्टमा वी७ र्यले यौ७ नेच्छामा कमी आएकाहरुलाई पनि मद्दत गर्ने र यौ७ न इच्छा बढाइदिने उल्लेख छ ।
लामो समय स७ म्भोग नगरेका महिलाहरु एकपटक स७ म्भोग गरिसकेपछि फेरि चाँडै चाहना राख्ने हुनु पनि यसैको कारण भएको बताइन्छ ।
आजको राशिफल : वि.सं. २०७७ माघ ११ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
December 11, 2020 admin रोचक 7765
January 22, 2021 admin रोचक 3633
April 26, 2021 admin रोचक 590